Gluing chikamu chakakosha cheakawanda mapurani-akavakirwa mapurojekiti. Asi kusarudza yakanakisa huni glue kune rako chairo basa harisi nyore nguva dzose. Hezvino izvo zvaunoda kuti uzive kuti ndeapi huni glue achashanda zvakanyanya kune yako projekiti. Polyvinyl acetate (PVA) glue ndiyo yakajairika mhando yehuni glue. Izvi t ...
Polyurethane inonamatira mamorekuru cheni ine carbamate boka (-NHCOO-) kana isocyanate boka (-NCO), rakakamurwa kuita polyisocyanate uye polyurethane mapoka maviri. Polyurethane adhesives, kuburikidza nekuita kwemapoka eisocyanate muhurongwa uye zvinhu zvine hydrogen inoshanda mukati kana kunze. .
Innovative Epoxy Resin Market Research Report - Yakakamurwa neApplications, Geography, Trends uye Projection 2026 Tsvagurudzo yakagadziridzwa paEpoxy Resin Indasitiri chidzidzo chakazara chinopa ruzivo rwakakwana nezve bhizinesi reEpoxy Resin kune vatsva vanopinda musika uye vatambi vakasimbiswa. Iyo ...
ne admin pane 20-04-21
Mar SALE MAHARA ZVIPO